Amụma nzuzo - Gamepron
Emelitere ikpeazụ: Jan 05, 2021 Gamepron. (“Anyị”, “anyị”, ma ọ bụ “nke anyị”) na-arụ ọrụ na weebụsaịtị Gamepron (“Ọrụ”).
Akwụkwọ a na-agwa gị gbasara iwu anyị banyere nchịkọta, iji na mkpughe nke Ozi Nkeonwe mgbe ị na-eji Ọrụ anyị.
Anyị agaghị eji ma ọ bụ kerịta ozi gị na onye ọzọ ọ gwụla ma akọwapụtara na Nzuzo Nzuzo a.
Anyị na-eji Ozi Nkeonwe gị maka inye ma melite Ọrụ ahụ. Site n'iji Ọrụ ahụ, ị ​​kwenyere na ịnakọta na ojiji nke ozi dabere na iwu a. Ọ gwụla ma akọwapụtara ya na Nzuzo Nzuzo a, usoro eji mee Nzuzo Nzuzo a nwere otu ihe ha pụtara na Usoro na Ọnọdụ anyị, enwere ike ịnweta ya na https://gamepron.com
Mgbe ị na-eji Ọrụ Anyị, anyị nwere ike ịrịọ gị ka ị nye anyị ụfọdụ ozi njirimara nkeonwe nwere ike iji kpọtụrụ ma ọ bụ mata gị. Ozi nkeonwe (“Ozi Nkeonwe”) nwere ike ịgụnye, mana ọnweghị oke na:
Anyị na-anakọta ozi nke ihe nchọgharị gị na-eziga mgbe ọ bụla ị gara Ọrụ anyị ("Log data"). Ihe ndekọ data a nwere ike ịgụnye ozi dịka adreesị Internetntanetị nke kọmputa gị (“IP”), ụdị ihe nchọgharị, ụdị ihe nchọgharị, ibe nke Ọrụ anyị ị gara, oge na ụbọchị nke ọbịbịa gị, oge ejiri na ibe ndị ahụ na ndị ọzọ ọnụ ọgụgụ.
Kuki bụ faịlụ nwere obere data, nke nwere ike ịgụnye ihe nchọpụta pụrụ iche na-enweghị aha. A na-eziga kuki na ihe nchọgharị gị site na weebụsaịtị wee chekwaa na draịvụ kọmputa gị.
Anyị na-eji “kuki” ịnakọta ozi. Nwere ike ịkụziri ihe nchọgharị gị ịjụ kuki niile ma ọ bụ gosipụta mgbe a na-eziga kuki. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnabataghị kuki, ị gaghị enwe ike iji ụfọdụ akụkụ nke Ọrụ anyị.
Anyị nwere ike iji ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ndị mmadụ n'otu n'otu iji kwado ọrụ anyị, inye Service na nnọchite anyị, ịrụ ọrụ ndị metụtara Service ma ọ bụ nyere anyị aka n'ịtụle otú e si eji Service anyị.
Ndị nke atọ a nwere ike ịnweta Ozi Nkeonwe gị nanị iji rụọ ọrụ ndị a na nnọchite anyị ma bụrụ iwu ka ha ghara igosipụta ma ọ bụ jiri ya maka nzube ọ bụla.
Anyị enweghị ike ịchịkwa, ma ghara ibu ọrụ maka ọdịnaya, nzuzo ma ọ bụ omume nzuzo nke saịtị ma ọ bụ ọrụ atọ ọ bụla.
Anyị ejighị nlezianya nakọta ozi nke onwe onye site na ụmụaka n'okpuru 18. Ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta na ị maara na nwa gị enyela anyị Ozi Nkeonwe, biko kpọtụrụ anyị. Ọ bụrụ na anyị achọpụta na nwatakịrị n'okpuru 18 enyela anyị Ozi Nkeonwe, anyị ga-ehichapụ ozi dị otú ahụ na sava anyị ozugbo.
Ikwenye na Iwu
Anyị ga-egosiputa Ozi Nkeonwe gị ebe iwu chọrọ ka ịme ya site na iwu ma ọ bụ nchịkọta.
Ọ bụrụ na ịnwere ajụjụ gbasara Nzuzo Nzuzo a, biko kpọtụrụ anyị.